Ezona Tekhnoloji zinxiba kakhulu | Martech Zone
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, umama wayenoloyiko entliziyweni yakhe olwalufuna ukuba anxibe defibrillator Ixesha eliphelele. Inkqubo ibeka iliso kwaye ilayishe idatha yentliziyo yakhe ngokusebenzisa iisenzi kwivesti, iya kulumkisa ngokuzenzekelayo ukuba bekukho indawo yokubamba inzwa, kwaye - kwimeko yokuhlaselwa sisifo sentliziyo- iya kulumkisa ababukeli ukuba babuye umva kwaye iya kusitshabalalisa isigulana. Izinto ezothusayo- kodwa zipholile kakhulu. Kwamnceda ukuba eze kutyelelo olubalulekileyo kwaye abe noxolo lwengqondo lokuba abekwe esweni. Itekhnoloji enxitywayo etshintsha umhlaba ngokwenene! (I-BTW: Umama wam akusafuneki ayisebenzise. Xa ebuyayo wenza icawa yecawa kwaye akukho ngxaki yafunyanwa. Enkosi ngokulungileyo!)
Yam, indawo exoxa ngetekhnoloji enxitywayo yefashoni, ibuze oochwephesha ukuba bafuna uhlobo olunjani lwetekhnoloji enxibayo-kwaye bavelise infographic engezantsi ngeempendulo. Ayizizo izinto ezisindisa ubomi ezinje ngeLifevest, kodwa itekhnoloji enokuthi iphucule indlela esiphila ngayo sonke.
Ngelishwa, ndinayo Google Glass kunye a Ukujonga amatye… I # 1 kunye # 2 kuluhlu. Le ziisenti zam ezimbini kuphela, kodwa ndiyekile ukunxiba zombini… khange zibuphucule ubuchule bam okanye zitshintshe ubomi bam ngandlela thile. Iwotshi yelitye lebhola inezinto ezithile ezipholileyo… njengokundibonisa ukuba ngubani ofowunela ifowuni yam ukuba bendikule ntlanganiso kwaye ifowuni yam ivaliwe… kodwa yajika yaba sisiphazamiso ngaphezu koncedo. IGlass kaGoogle ayenzanga kwanto kum - ndicinga ukuba iGlasshole ligama elihlekisayo kodwa elifanelekile kubantu abaninzi endibona ukuba banxibe. Undikhumbuza nge-Bluetooth craze apho, okwethutyana, iqela lezidenge lalihambahamba nazo ezindlebeni zazo kwaye zibonakala ngathi ziyazithetha kweyona ndawo inezothe.
Ndijonge phambili kwinto engenziwa nguApple ukuguqula eli shishini. Ukuba ndingafikelela kuninzi lweeapps zam ukusuka kwisibonisi seretina esihlahleni sam ebesikulungele ukufundwa (endaweni yomboniso wePebble okhangeleka ngathi unescreen seNintendo seminyaka engama-20), ndingafuna ukunxiba isixhobo ukuba sijongeka silungile kwaye isebenza kakuhle. Ndicinga ukuba kusekude ukuba sihambe! Ucinga ntoni?
tags: iglasi kaGoogleIngqalutye iwotshi smarti-watch watchsmartwatchItekhnoloji yokunxiba